370 Dragon Dredge wuxuu Bilaabey Shaqo Mashruuca Dhul-Fidinta -Ellicott Dredges
370 Dragon Dredge Oo Bilaabaysa Inay Ka Bilaabato Mashruuca Dhul-Boobta
Bopa, Benin: Saadka iyo Caawinaada SA, qandaraasle goos goos ah oo ka yimid Cotonou, Benin, ayaa waxaa la siiyay qandaraas qandaraas ah oo Wasaaradda Deegaanka Deegaanka iyo Horumarinta Joogtada ah si ay gacan uga geysato xakameynta fatahaadda xilliyeed ee gobolka.
Ku dhawaad ​​seddex-meelood meel dadka ku nool Galbeedka Afrika waxay ku nool yihiin bulshooyinka ay soo gaareen saameynta horumarka xeebta liita iyo isbedelka cimilada ee gobollada ay ku badan yihiin nabaad-guurka iyo daadadka. Sanadkii 2018, inka badan 100,000 oo qof ayaa hoy la'aan ah, waxaana 43 qof loo dhintey a daad weyn magaalada Cotonou, Benin.
Bishii Nofeembar 2019, meel ku taal bannaanka Bopa, Benin ayaa daadad ku dhufatay dhowr jeer ka dib roob da ’culus. Fatahaadaha ayaa ku hanjabay inay duminayaan guryo ku yaal xaafad u dhow. Crews ayaa adeegsan doonta a Ellicott 370 Dragon® Kala-go ’ in laga saaro inka badan 150,000 yabbaal cubic oo qashin qulqulaya oo loo adeegsado maaddada la qoday si ay u sameeyaan canshuur lagu ilaaliyo guryaha si looga ilaaliyo inay maydhaan.
Mashruucan dayactirka xeebta waxaa maalgaliya Bangiga Aduunka iyadoo loo marayo Barnaamijka Maalgashiga Residaence WACA waxaana loogu talagalay in lagu xoojiyo adkeysiga bulshada sida Bopa. Barnaamijka Maalgashiga Awoodda ee WACA wuxuu taageeraa dadaalka waddammada ee kor loogu qaadayo maareynta kheyraadka ay wadaagaan ee xeebaha iyo yareynta halista dabiiciga ah iyo tan-aadanaha ee saameeya bulshooyinka xeebaha ee Galbeedka Afrika sida Benin, Togo, Senegal, Sao Tome, Mauritania, iyo Principe.